warkii.com » Real Madrid Oo Diyaarinaysa Dalab Ay Ka Gudbiso Mason Greenwood & Lacagta Ay Dul-dhigayaan
Real Madrid Oo Diyaarinaysa Dalab Ay Ka Gudbiso Mason Greenwood & Lacagta Ay Dul-dhigayaan
Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez ayaa isha ku haya da’yarka Manchester United ee Mason Greenwood, waxaanu ku darsaday liiska ciyaartoyda uu qorshaynayo in xagaagan uu keeno Santiago Bernabeu.
Mason Greenwood oo 18 jir ah, waxa uu Man United u dhaliyey laba gool oo qurux badan kulankii Bournemouth ay Sabtidii ku garaaceen ee kusoo dhamaaday 5-2, waxaanu u ahaa rikoodh aanay cidina uga horreynin.
Weeraryahanka reer England oo 15 gool dhaliyey xili ciyaareedkan, waxa lagu daray diiwaanka taariikhda ee da’yarkii ugu goolasha badnaa, isaga oo ka sarreeya Wayne Rooney.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa waddanka Spain, Madaxweynaha Real Madrid ee Florentino Perez ayaa qorshaynaya inuu Mason Greenwood keeno kooxdiisa, isla markaana uu ka mid noqdo ciyaartoyda da’yarta u badan ee uu ku ururinayo Santiago Bernabeu.
Wargeysku wuxuu sheegay in Perez uu diyaarinayo lacag dhan 100 Milyan oo Euro oo uu hordhigi doono Man United marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaagan, laakiin wargeysku ma sheegin sida ay Los Blancos ugu suurtogeli doonto inay lacagta intan le’eg ku bixiyaan xilli ay dhaqaale xumo ka cabanayaan iyo haddii ay Manchester United ogolaan karayso dalabka.
Real Madrid oo ay hore usii joogeen ciyaartoy da’yar u badan oo ay ka mid yihiin Vinicius Junior, Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Reinier iyo kuwo kale, waxa Mason Greenwood oo kusoo biiraa uu u abuuri doonaa xiddigo da’yar u badan oo mustaqbalka hoggaamin doona Los Blancos.
Si kastaba ha ahaatee, qorshaha Real Madrid ayaa la ogaan doonaa haddii si dhab ah loo dhaqaajin doono marka uu suuqu sida rasmiga ah u furmo iyo haddii kale.